Mayelana NATHI - Dongguan Dongwangda Precision Technology Co., Ltd.
Isi-DongguanI-Dongwangda Precision Technology Co, Ltd.yibhizinisi lobuchwepheshe obuneminyaka eminingi yesipiliyoni somkhakha futhi ligxile ekukhiqizeni ama-oda amaningi we-R & D edidiyelwe, ukwakheka, ukucubungula okucacile kwe-CN, nokucutshungulwa kwensimbi ngokunemba. Ochwepheshe benkampani banqwabelene nesipiliyoni soMklamo nokukhiqiza okucebile nobuchwepheshe obuhle kakhulu bokukhiqiza; Sinikeza izinsizakalo zobungcweti kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe kumakhasimende ezimbonini eziningi, ezikhethekile ngezesekeli zezimoto, izinto zedijithali, okokusebenza kwamakhompiyutha, imikhiqizo yokuvikela ezempi, imishini yezokwelapha, izimpahla zasekhishini, amathoyizi, izesekeli zezingxenyekazi zekhompuyutha Ukwenza ukubukeka kwemodeli, ukwakheka nokulungiswa kwemishini, njll futhi ukukhiqizwa ngobuningi.
I-Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd. itholakala edolobheni elidumile e-China. Imikhiqizo ephambili yilezi: imodeli yesandla se-zinc alloy, imodeli yesandla, ukucubungula imodeli yesandla, ifektri yesandla, i-aluminium alloy processing, ukucacisa kanye ne-aluminium alloy eyinkimbinkimbi, ukucubungula umkhiqizo we-batch, izingxenye eziyinkimbinkimbi zokucacisa izitshalo Ukucubungula izitshalo, izitshalo ezilula zokwenziwa kwesikhunta, njll. ifakwe izikhungo eziphambili zokunemba ezisezingeni eliphakeme ze-CNC, imishini yokugaya, imishini yokugaya, imishini ye-spark, isikhunta se-vacuum neminye imishini yensimbi, enekhwalithi ethembekile, isakhiwo esikahle, namamodeli wesibonelo asheshayo. Inikeza izimo ezithandekayo kumakhasimende ukuthi aqale imikhiqizo yawo futhi abambe namathuba ebhizinisi. Ithimba lethu labaphathi lisencane, linamandla, futhi liyaphayona. Sineqembu labasebenzi abanesipiliyoni, abakhuthele nabacophelelayo, futhi indawo esisebenza kuyo ihlanzekile futhi ihlanzekile. Zonke lezi zinikeza isiqinisekiso esifanelekile sokwakhiwa kwamamodeli asezingeni eliphakeme.
Le nkampani njengamanje inohlelo lokuphathwa kwebhizinisi oluzwakalayo, iqinisa njalo ukuphathwa kwangaphakathi, ithuthukise izinga lobuchwepheshe namakhono okuphatha abasebenzi, futhi "iwina ukwethenjwa kwamakhasimende ngekhwalithi, iwina ukuzethemba kwamakhasimende ngobuchwepheshe, iwine ukwaneliseka kwamakhasimende ngensizakalo, futhi iwine amakhasimende nge ubuqotho "" Ukuthakazelelwa "umgomo wabo bonke engisebenza nabo; "Ukusebenza kahle okuphezulu, ikhwalithi enhle kakhulu, isikhathi sokulethwa kwe-quasi, ukwaneliseka kwamakhasimende" kuyindlela yokuvumelana ngazwi linye yabo bonke engisebenza nabo. Ngikholwa ukuthi yisisekelo esiqinile kuphela esingenza inqubekela phambili ye-leapfrog. Le nkampani ibilokhu inamathele emoyeni "wobunye, ukuphayona, ukusebenza kanzima nokuqhubekela phambili" kanye "nokuhlushwa, ukusizakala, ukubonga" ifilosofi yebhizinisi. Ngokususelwa kumigomo yokuqinisekiswa kwekhwalithi, intengo efanelekile, ukulethwa ngokushesha nokugxila kwezinsizakalo, kuthatha ukwenziwa kweChina njengomsebenzi wayo futhi kudala ukonga amandla okusha Inhloso yezikhathi "ukuvikela ezemvelo uchungechunge lwezimboni zezomnotho, kusuka emisha emisha kuya emisha yezimboni ". Isithunzi senkampani semukelwe kahle ngamakhasimende.
I-Shouban model-hardware, ipulasitiki, i-elekthronikhi nokunye ukwakheka komkhiqizo nocwaningo nentuthuko, ukwenziwa kwesimodeli seShouban, ukuklanywa kwesikhunta nokukhiqizwa, ukukhiqizwa komkhiqizo omningi, izingxenye zokulungiswa, ukuthuthukiswa kwemishini yokuzenzekelayo. I-Dongguan Dongwangda Precision Technology Co., Ltd.iyisebenzisa ngokuphelele isoftware esezingeni eliphakeme ye-CAD / CAM / CAE: i-PRO / E, UG, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD, futhi isebenzisa kusuka ekwakhiweni, ekubunjweni kobunjiniyela, ekwakhiweni kwesakhiwo, ekukhiqizweni kwesibonelo, isikhunta ukukhiqizwa kwe-batch Ukukhiqizwa kwesevisi eyodwa-stop kunciphisa kakhulu umjikelezo wokuthuthukiswa komkhiqizo, kusindisa izindleko zentuthuko, futhi kuthuthukise ukuncintisana kwemakethe kwemikhiqizo.
1. Ukukhiqizwa kwesampula ye-Hardware: (Izinto: i-aluminium alloy, i-zinc alloy, ithusi elibomvu, ithusi, i-magnesium alloy, i-tantalum, i-nickel alloy stamping, ukugoba, njll.);
2.Ukukhiqizwa kwebhodi yesandla ngokunemba kwe-CNC (izinto ze-ABS, i-PC, i-PP, i-POM, i-PMMA, i-PA, i-PPS, i-PE, i-Bakelite, njll.)
3. Ukuhlanganiswa komshini (i-batch encane) (Izinto: i-ABS, i-PC, i-PP, i-PMMA, i-PVC, iraba, izinto zokumelana nokushisa okuphezulu, njll.);
4. Laser imodeli prototyping okusheshayo, SLA, SLS;
5. Isikhunta esilula: esetshenziselwa ukukhiqizwa ngobuningi, umjikelezo wokuvula isikhunta omfushane, ikhwalithi yomkhiqizo eshibhile nokusebenza kwempahla okuhambisana nokubunjwa okusemthethweni;
6.Ukwelapha okungaphezulu njengokufafaza uwoyela, ukubhaka i-lacquering, ukusula izintuli, ukuphrinta kwesilika kwesikrini, i-electroplating, i-oxidation, i-laser eqoshwe, umdwebo wocingo, njll.
1.Ukuklanywa kwemikhiqizo yezimboni, ukwakheka kwesakhiwo se-3D;
2. Izimoto, izithuthuthu, amathoyizi ezimoto, nezinye izindlela zokuhamba kanye nezingxenye ezahlukahlukene ezinkulu nezincane;
3. Imikhiqizo yokuxhumana efana nezingcingo, imishini yefeksi, omakhalekhukhwini, ama-walkie-talkies, nezinsimbi zomnyango ze-intercom;
4. ama-TV, abaqaphi, ama-air conditioner, ama-vacuum cleaner, ama-humidifiers, nezinye izinto zasendlini;
5. Onodoli bamathoyizi, izibalo zokulingisa, izinto ezikhethekile zezinto ezisebenza ngogesi imboni, imisebenzi yesenzo;
6. Ukukhiqizwa kwamamodeli ahlukahlukene e-aluminium alloy metal prototype, i-bulk aluminium alloy nemikhiqizo yomjovo wepulasitiki;
7. Izingxenye zomshini ezahlukahlukene, imishini ye-B, okokusebenza kwe-elekthronikhi, nemishini yezokwelapha;
8.Mechanical action izinyo ibhokisi, SLA prototyping okusheshayo;
9.Veza ukukhiqizwa kwesikhunta esiningi, umjovo kawoyela, ukuphrinta kwesikrini, ukudweba ngocingo, njll.
5-eksisi CNC Lathe, Cnc Machining Center Icubungula, Icubungula i-Hand Hand Board, Cnc Engagqwali Icubungula, Imishini Yezinsimbi Zemishini, Cnc Precision Izingxenye Icubungula,